नयाँ एन्ड्रोइड फोन किन्नु भयो ? यसरी एपबाट मोबाइल हराउन बाट जोगाउनुहोस् - नेपाल घटना
नयाँ एन्ड्रोइड फोन किन्नु भयो ? यसरी एपबाट मोबाइल हराउन बाट जोगाउनुहोस्
प्रकाशित : २८ मंसिर २०७६, शनिबार १७:५८
आजको डिजिटल संसारमा,तपाईंलाई मोबाईल उपकरण हराउँदा निकै चिन्ता हुन सक्छ, तर मोबाईलमा भएको डाटा हराउनु झनै कष्टकर हुन्छ। यदि तपाईंले आफ्नो मोबाइल फोन हराउनु भएको छ वा फोन बिर्सने बानी छ भने यि ८ एपहरुको मद्दतले तपाईले मोबाइलको स्थान ट्र्याकिंग गर्न सक्नुहुनेछ । आउनुहोस यि ८ एपहरुको बारेमा जानीराखौ :
Life360 एक मा सबै उपयोग भएको ट्र्याकिंग एप हो जसले तपाईंलाई आफ्नो हराएको फोन वा ट्याब्लेटको स्थान ट्र्याक गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंलाई तपाईंको साथीहरू र परिवारका सदस्यहरूसँग सम्पर्कमा रहन मद्दत गर्छ । यसका साथै तपाईंले एस एपमा लोकेसन सेएरिङ्ग को सुविधा पनि पाउनुहुन्छ ।
एस एपमा तपाईं समूहहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, जसमा व्यक्तिहरू थप्न सक्नुहुनेछ, र समुहका व्यक्तीहरुलाई समुहको निजी नक्सामा उनिहरुको स्थान हेर्न सक्नुहुनेछ ।यो निजी नक्सा समूहका सदस्यहरूका लागि मात्र उपलब्ध हुन्छ । यसले तपाईंलाई सबै समूह सदस्यहरूको स्थान ईतिहास हेर्न मद्दत गर्दछ। फाइदा:
सदस्यहरु बीच सजिलो संचार को लागी समूह च्याट को सुविधा ।
वास्तविक-समयमा अरु साइन इन को चेतावनीहरू पठाउन मद्दत गर्दछ ।
सडक दुर्घटना पत्ता लगाउने सुरक्षा सुविधा प्रदान गर्दछ ।
नि: शुल्क योजनामा केवल २ वटा अलर्ट २ दिनको स्थान ईतिहास राख्न मिल्छ।
२. Google Find My Device
गुगलको Find My Device सब भन्दा कुशल स्थान ट्र्याकिंग एपहरू मध्ये एक हो। यसले तपाईंलाई हराएको उपकरण पत्ता लगाउन वा ट्र्याक गर्न सहयोग गर्छ । साथसाथै यो एपबाट तपाईंले फ्याक्ट्री रिसेट गरेर आफ्नो डाटा सुरक्षित राख्न सक्नु हुन्छ । तपाईंले आफ्नो घरमा फोन भेट्टाउनु भएन भने यो एपको मद्दतले तपाईंले फोन मा घण्टी दिन सक्नु हुन्छ । कसैले तपाईंको फोन भेट्टाएको छ भने तपाईंको फोनमा यो एपबाट मेसेज पनि डिस्प्ले गराउन सकिन्छ जसमा तपाईंको नम्बर र नाम देखाउन सकिन्छ । यदि तपाईंको फोन हरायो वा चोरी भयो भने,फोन लक गर्न र त्यसमा भएको सामग्री मेटाउन सकिन्छ । फाइदा:
तपाइँको फोनको सामग्री मेटाउन अनुमति दिएर तपाइँको गोपनीयता सुरक्षित गर्दछ।
कुनै अतिरिक्त सुविधाहरू वा इन्-एप खरीदहरू बिना नि: शुल्क आउँदछ।
गुगल नक्सा जस्तै बाहिरी र इनडोर नक्शाको रूपमा प्रदर्शन गर्दछ।
यो एप एन्ड्रोइडको लागि मात्र उपलब्ध।
कुनै सामुहिक च्याट वा सामुहिक स्थान ट्र्याकिंग सुविधाहरू छैन ।
३. Family Locator
फेमिली लोकेटर पनि लाइफ ३६० जस्तै बिशेष एप हो जसको लोकेसन ट्र्य़ाकिङ्ग को मद्दतले तपाईले आफ्नो परिवारका सदस्यहरुको यथास्थितीमा लोकेशन ट्रयाक गर्न सक्नुहुन्छ । यो एप को बिशेषता भनेको यसमा तपाइले बनाउनु भएको ग्रुप का सदस्य हरु संग च्याट र लोकेसन शेयारिंग गर्न सक्नुहुन्छ । यो एप ले तपाइलाई ग्रुप बनाउन र नक्शामा प्रत्यक्ष तपाईंको बच्चा र परिवारका अन्य सदस्यहरूको स्थान ट्र्याकिंग गर्न अनुमति दिन्छ। यसमा भएको च्याट फिचर ले तपाइलाई परिवारका अन्य सदस्य संग कुरा गर्न सजिलो गराउछ । यो एप मा के बिशेष छ त ? यो एप म तपाईले सुरक्षित र असुरक्षित स्थान तोक्न सक्नुहुन्छ । यदि तपाइँका परिवारका सदस्यहरु कुनै असुरक्षित स्थानमा गएको खण्डमा अथवा त्यस क्षेत्रबाट बाहिर आएकोमा तपाइलाई सुचित गर्छ । फाइदा:
अन्तिम ७ दिनका सबैको स्थान ट्र्याकिङ्ग लोकेसन देखाउँदछ।
समूहका सदस्यहरूसँग च्याट गर्न मिल्छ ।
वास्तविक समयमा अलर्टहरु पठाउछ, जब कोहि सदस्यहरु असुरक्षित स्थानमा पुग्छन ।
फोन हराएको खण्डमा , फोन लक् अथवा डाटा मेटाउने व्यवस्था छैन ।
आई शेयारिंग लोकेसन ट्र्याकर अर्को चाखलाग्दो एप हो जस बाट हराएको फोन का साथ साथै परिवारका सदस्यहरु पनि ट्रयाक गर्न सकिन्छ । यो एपले तपाइलाई समुहहरु बनाउन , समूहका सदस्यहरु संग कुराकानी गर्न र एक अर्काको यथास्थितीमा भएको ठाउ थाहा पाउन मद्दत गर्छ। यसका साथै यो एपले कुनै सदस्यहरु कुनै ठाउँ पुगेको अथवा त्यो ठाउँबाट हिडेको जानकारी नोटिफ़िकेसन बाट गराउछ । यो एपको बिशेषता भनेको फोनलाइ बेसरी हल्लाउदा यो एपले तुरुन्त आपतकालिन अलर्ट पठाउछ । फाइदा:
जब समूहका सदस्य कुनै स्थानमा पुग्छन वा स्थान छोड्छन भने अलर्ट आउछ ।
सुरक्षा सुविधाहरूसँग जस्तै आपतकालीन अलर्टहरू र वास्तविक-समय सूचनाहरू उपलब्ध छन् ।
यो एप को नि: शुल्क संस्करण छैन।
यो एप पहिलो ७ दिनको लागि मात्र नि: शुल्क चलाउन सकिन्छ।
यो एप ले तपाईंलाई हराएको मोबाइल फेला पार्न मद्दत पुर्‍याउँछ, र यसले तपाईंलाई तपाईंको परिवारका सदस्यहरू, वा मित्रहरूको स्थानमा नजर राख्न मद्दत गर्दछ! यो नि : शुल्क चलाउन पाइन्छ । यसले तपाईंलाई तपाईंको परिवार वा समूह सदस्यहरूको सही स्थान, उनीहरूको मोबाइल ब्याट्री, उनीहरूको उपकरणहरूमा इन्टरनेट जडानको प्रकार, र तिनीहरू द्वारा तय गरिएको दैनिक दूरी जान्न अनुमति दिन्छ। यो एप मा तपाइले बनाउनु भएको सुरक्षित र असुरक्षित स्थानहरुमा समूहका सदस्य प्रवेश गरे वा छोडेपछि सूचना पठाउँदछ। फाइदा:
तपाईलाई सुरक्षित र असुरक्षित स्थानहरु बनाउन मद्दत गर्छ।
तपाईंलाई वास्तविक-समय अलर्टहरू पठाउँदछ ।
हराएको वा चोरी भएका मोबाइलमा अलर्ट हरु पठाउन मिल्दैन
६. xfi Locator
xfi लोकेटर हराएको मोबाइल फेला पार्नकै लागि निर्मित एक साधारण एप हो। तपाईंले प्रत्यक्ष नक्सामा सजिलै हराएको उपकरण फेला पार्न सक्नुहुनेछ र नेभिगेट गर्न सक्नुहुनेछ । यस एप मा तपाइले एक भन्दा बढि खाता खोल्न र मोबाइलहरु दर्ता गर्न सक्नु हुन्छ । यसका साथै यसमा अलार्म सुविधा पनि छ जसले हराएको उपकरणमा घण्टी दिन र कम्पन गर्न मद्दत गर्दछ। फाइदा:
एउटै उपकरणमा धेरै खाता खोल्न मिल्ने।
प्रयोगकर्ताहरुको हराएको उपकरणमा घण्टी बजाउन मिल्ने ।
प्रत्यक्ष नक्सामा सजिलै हराएको उपकरण फेला पार्न मिल्ने।
हराएको उपकरणमा डाटा मेटाउनको नमिल्ने ।
Familonet हराएको वा चोरी गरिएको उपकरणहरू ट्र्याक गर्नको लागि अर्को उत्कृष्ट एप हो। यो एप को प्रयोगले तपाईंलाई तपाईंको बच्चाहरू र परिवारका सदस्यहरूमा नजर राख्न र तिनीहरूसँग कुराकानी गर्न मद्दत गर्छ । अरु एपमा जस्तै यसमा पनि तपाइले बनाउनु भएको सुरक्षित र असुरक्षित स्थानहरुमा समूहका सदस्य प्रवेश गरे वा छोडेपछि सूचना पठाउँदछ। फाइदा:
तपाईंलाई आफ्नो मनपर्ने गन्तव्यहरू सेट अप गर्न अनुमति दिँदछ।
सतर्कताहरू पठाउँदछ जब कोही सदस्य गन्तव्यमा पुग्दछन अथवा गन्तब्य बाट हिड्दछन ।
समूहका सदस्यहरूसँग कुराकानी गर्न च्याट सुविधाको साथ आउँदछ।
हराएको उपकरणमा अलर्टहरु पठाउन मिल्दैन ।
ट्रयाक भिउ एक अद्भुत सुरक्षा निगरानी एप हो जुन तपाईंलाई तपाईंको हराएको उपकरणहरू अनुगमन गर्न र फेला पार्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंलाई तपाईंको उपकरणको साथ साथै तपाईंको घरको सुरक्षा हेर्न र ट्र्याक गर्न मद्दत दिन्छ। यसले तपाईंको हराएको उपकरणमा तत्काल चेतावनी वा रिमोट बज पठाउन सक्छ। यसमा दुइतर्फी कुरा गर्न मिल्ने फिचर पनि छ । फाइदा:
उपकरणहरूको वास्तविक समय ट्र्याकिंग प्रस्ताव गर्दछ ।
हराएको उपकरणमा सन्देशहरू वा ध्वनि अलर्ट पठाउन मिल्छ।
प्रत्यक्ष भिडियो निगरानी सुविधाको साथ आउँदछ ।
हराएको उपकरणमा डाटा मेटाउन मिल्दैन ।